Gudoomiyaha Hiiraan Yuusuf Dabageed oo sheegay in dil loogu hanjabay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gudoomiyaha Hiiraan Yuusuf Dabageed oo sheegay in dil loogu hanjabay
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada B/weyne ayaa sheegay in sarkaalka ciidamada dalka Jabuuti ee ku sugan gobolkaasi uu ugu hanjabay dil kadib markii uu kala hadlay falalka dilalka ah ay ciidamada Jabuuti halkaasi ka geystaan.
Waxa uu Yuusuf Dabageed sheegay in arrinta dilka ah oo ay ciidanka Jabuuti ka geystaan gobolka Hiiraan uu kala hadlay safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Soomaliya Dayib Dubad Rooble, kadib markii uu kula kulmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaliya.
“Marnaba reer Hiiraan uma dul-qaadanayso in askari Jabuutiyaan ah uu dil u geysto shacabka reer Hiiraan, maalin dhaweyto taliyaha ayaan weydiiyay maxaa xabadda ula dhaceysaan shacabka wuxuuna igu yiri, adinka ayaa idin dilayaa hadii aadan meesha ka tagina, arrintaasi waan gaarsiinay safiirka Jabuuti ee u fadhiya Soomaaliya” Sidaasi waxaa yiri Yuusuf Dabageed.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa si kulul uga jawaabay hadalkii dhawaan kasoo yeeray odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan, kaas oo ahaa in maamul goboleed u gaar ah Hiiraan la dhisaayo, kadib caleema saarka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
“Maamul kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya, marnaba lagama dhisi doono gobolka Hiiraan, waxaana odayaasha dhaqanka Hiiraan ugu baaqayaa inay miiska wada-hadalka yimaadaan, si heshiis buuxa laga gaaro wixii ay tabanayaan” Ayuu hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay Yuusuf Dabageed.